Books :: Antikiriistoos – Dajaal Korayaa Qarsoon
Home/Books/Antikiriistoos – Dajaal Korayaa Qarsoon
Antikiriistoos – Dajaal Korayaa Qarsoon
Seller: Aboosto Express Inc Contact Seller
Buuggani waa sheeko dhab ah, mayee waa taariikh sugan, mayee waa siro qarsoon. Waxan oo ‘May’ ah waxa iga keenaya been ma ahee waa run is biirsatay uun.
Buuggan adigu arkhrin maysid marka aad bilawdide isagaa is akhrniya, kaliya adigu waxaad masuul ka tahay rogrogista bayjajkiisa. Waa saddex iyo toban sheeko oo sheeko kasta shakhsi gaar ahi kaaga dhacayo/sheekaynayo. Mar shaydaan baad iskala qabsanaysaa oo ‘Hayeh’ daa guraysaa, mar jin baad iska raacaysaa oo hawada la duulaysaa, mar shaydaaniyad gabadh ah baad dhegta hoos dhiganaysaa oo xog iyo wacaal aad ka yaabtid ka dhuraysaa, mar kale si aanad u qaloon waxa ku wehelinaya insi aad is fahmaysaan oo wax kuu itiiminaya si aad fahmi kartana kuugu warramaya.
Haddaad mar bilawdid, aan kansho/jaanis u helo iyo waxaas lagaa maqli maayo, si jinniyadaysan baad ugu kogaysaa buuggaba.
Marka laga yimaaddo xogaha iyo siraha buuggan ku duugan, waxa xiisaha gaar ah u sii yeelayaa ah, inuu adiga si toos kuula hadlayo, haa waa uu kula hadlayaa oo kula sheekaysanayaa si aad is horfadhidaan oo kale. Sida buugta kale ku odhan maayo “Marka aynu ka hadlaynno.... marka la joogo....” Se waxa uu ku odhanayaa “Adaan kula hadlayaa.... Ina mari....Halkan soo gal/fadhiiso...Gub buuggan marka aad dhammayso.... iwm”. isku xidhka iyo isa sudhanta sheekooyinka ee bilow ilaa dhammaad waa sir kale oo buuggan xiiso cajiib ah u yeelaysa.
Haddii aadan akhriska jeclayn, ama aad jeceshahay se aad caajislow tahay buuggani waxa uu kaa qaadayaa wahabka akhris nacaybka ah ee kusoo wajahay.
Dhacdooyinka iyo sheekooyinka buugga ku jiraa waxay kugu riixiyaan baadhis iyo wax is weydiin joogto ah. Xogaha qaar waad amakaagaysaa oo sheekh Googlaad isu sii daynysaa, waad soo xaqiijinaysaa oo soo noqonaysaa adoo leh “Wallaahi waa runtii” illeen shaydaan run sheega maantaa kuugu horreysee.lol – Googlahaba isagaa ka taliyee!
Anigu labo cisho oo xidhiidh ah baan ku dhammeeyay. Waan ku qadeynayey oo ku cashaynayey. Ilbaxnimooyin iyo xaddaarado horaan u duulayay. Laba kun iyo shan boqol oo sano ka hor dhalashadii Ciise-CS iyo ilaa 2018-ka Ciise debadii baan la noolaa. Heshiiskii (Contract) u horreeyay ee insiga iyo jinkaan u kala saxeeyay oo goobjoog u noqday. Dhacdooyin xaraabo ah baan sida filimaanta iska daawanayey, mayee filin shaydaan matalayo baan bilaa rumuud ku daawaday dhabtii. Shirar run ah baan ka qayb galayey. Mahadhooyin dhakofaar ah baan indhaha u quudhi waayay! Dulqaadkaa igu yaraaday sida ay wax u socdaan oo buuggaba isku laab baan is idhi ciil iyo cadho awgeed!
Giraanta adduunku sida ay u socotaan fahmay, markii horeba waan fahansanaaye shaydaankaa ii sii xaqiijiyey. Dhacdooyinka iyo taariikhaha qaar waan diiday oo waan aqbali waayay, waayo; Sida aan hore u haystay ee maskaxdayda lagu celceliyay bay waafaqi wayday. Imika waa inaan qiimayn gaar ah ku sameeyo wixii hore waayo, anigu marnaba goobjoog uma ahayne, tan danbe ee shaydaankaa na run u dhaw marka aad eegtid caddeymaha iyo waaqica uu kuugu lifaaqayo.
Is weydiimo badan oo maalin kasta maskaxdayda daalin jiray baan jawaab u helay, ta ugu hooseysaaba ah inaan ogaaday; Sababta ay sixiroolayaashu u adeegsadaan ducooyinka, aayadaha iyo magacyada diimeed. Waxaan odhan jiray, waar sixirkan iyo diintan maxaa is dhexdhigay horta! Si degan u akhri adigaa ka dhex heliye.
Marka aad sheekadan dhammayso waxaad is weydiinaysaa uun labo su’aalood oo kaliya; Sheekadan iyo waxan oo siro ah yaa u sheegay qoraaga, ma jin iyo shaydaan? Xogtani ma saxbaa mise waa male-awaal?
- Labadaa weydiimoodba waa la weydiiyay qoraaga isaga oo bartan Faysbuugga ‘Live’ kaga jira, waxa uu yidhi; Xogtan shaydaan iyo jinni toona shuqul kuma laha ee waa xog kaydsan oo ku filiqsan taariikhda iyo diinta waan soo ururiyay uun, ka dibna waxaan ka allifay sheekadan. Dhammaan dhacdooyinka iyo shakhsiyaadkan ku jiraanna waa wada sax sugan oo taariikhda iyo diimahaba ku cad.
Waxaas oo dhan waxa suurogelinaya tebinta iyo turjubaadda mar la aragga ah ee uu turjumuhu inoogu farayaraystay – Barakoow dheh.
Buugga carabiga ahi waa 323 bog, halka uu turjumaagu kusoo koobay 305 bog. Af-Carabi Af-Soomaali ka yaraaday waad garanaysaa adba, waxa sababay eray xulashada cuddoon ee uu tarjumuhu doortay... mararka aan madaxa u ruxay waxa ka mid ah; Mar uu ka warramayay nin gabadh la qafaashay oo xidhxidhan (Bookahoonatoos) u yimi ka dibna ay shahwaddu ku kacday, Qoraagu waxa uu ku cabbiray weedha ah "جن جنون الرجل" halka uu turjumuhu xushay weedha ah “Jinkaa ku kacay”. Mar kale isaga oo tarjumaya “الفتاة الشقية” waxa uu yidhi “Yarta shidan”. Waa turjumaad xeeldheer oo meelfog macnaha kala soo baxaysa runtii.
Wax ku saabsan qoraaga buugga oo aan ka ahayn magaciisa kama helin buuggan turjuman. Xogta qoraaga ee buuggan ku xusani waa magaciisa oo saddexan oo qudha! Deegaankiisa, afkii uu buugga ku qoray, eeggii uu qoray, buugaagtiisa kale, xirfaddiisa iyo shakhsiyaddiisabu kuma xusna buuggan.
Baadhis yar oo degdeg ah waxaan ogaaday ku saabsan yar oo qoraagu leeyahay, waa; Dr. Axmed Khaalid Mustafa, qoraa Masar u dhashay, degan Sucuudiga, waxa uu curiyey sheekooyin dhawr sida; Antikiriistoos (2014), Dhulkii Dadka Hoose(2017) – أرض السافلين iyo Malaa’igta Nasiibka Leh – ملائك نصيبين (wali may soo bixin). Waa saddex sheeko oo is fassiraya.
Qoraa/Abwaan/Turjumaa Cali Ileeye waxaan ku boorrinayaa inuu ta labaad ee ah أرض السافلين noo raaciyo sannadka danbe IA.
Khalaadka madbacadeed ee buugan ku jiraa ma badna marka loo eego buugaagta kale, midh’midh iyo dhif baad arkaysaa, sida erayda barnaamijka Word-ku liqsanyahay ee uu toos u weynayniyo tusaale; ‘i’ word-ku waxa uu u yaqaanna ‘I’ oo ingiriisi ah, si toos ahna wuu u rogayaa. Waxa jira kelamado badan oo sidan kale ah.
Qaryaan Maanmaal Buureed Gurxan baa si hufan u tifatiray dhiganahan.
Buugaag dhawr ah oo ay daabacday Hiil Press buugganna ka mid yahay, waxaan ku arkay khadka qoraalka oo meelaha qaar baaba’aya ama khafiifaya, akhristahana yara dhibaysa – ma badna laakiin.
Ugu danbayn, waxaan arkay meelo dhawr ah oo qoraaga iyo turjumuhu ay si buuxda ugu kala tagsanyihiin/duwanyihiin.
Tusaale; Bilawga sheekadaba qoraagu waxa uu odhanayaa; “DHAMMAAN/جميع sheekooyinkani waa kuwo ku dhisan dhacdooyin dhab ah oo sugan” Halka uu turjumuhu ku afnaqayo sidan; “INTA BADAN sheekooyinka ku jiraa waa kuwo ku dhisan dhacdooyin dhab ah oo sugan”.
Tusaale kale; bogga 315’aad ee buugga carabiga ahi marka uu ka sheekaynayo nebi Muuse-CS, waxa uu odhanayaa sidan; “... Muuse waxa uu cadhooday cadho daran, DHABTII, WAXA UU KU CAANBAXAY CADHADA DEGDEGGA AH, waxa uu sitay looxyo ay ku dhigantahay Tawraaddii uu Eebe U SOO YEEDHIYEY/أملاه”. Eeg bogga 297’aad turjumuhu waxa uu ku afnaqayaa sidan; “.... Muuse si daran ayaa u cadhooday, waxa aanu dhulka ku tuuray looxyo ay Tawraadi ku qoran tahay oo Eebe u soo WAXYOODAY”. Meelo kale oo sidan isu dhaafsiisanina way jiraan se sababta iyo ujeeddada turjumaha uun baa garanaya.
Gebogabadii, Si guud buugaagta waxaan ku guraa laba khaanadood oo kala ah; 1) Buug waqti lumis ah 2) iyo buug waqti kordhis ah. Buuggani waxa uu si kedis ah u galay khaanadda labaad ee buugta waqti kordhinta iyo koboca garaadka ka qaybqaadata.
Akhris wacan jaallayaal.
WD: Jaalle Jim'ale Ibrahim
Qoraaga: Dr. Axmed Khaalid Mustafe(Masaari) – Af Carabi
Turjumaha: Abwaan/Qoraa; Cali Ileeye.
Hal Ka Haleel: Sooyaalka Hadraawi iyo Suugaantiisa
Taariikhda Soomaaliya : Hannaankii Dowladnimo ee Saldanadda Geledi
Back Pain Need Help
Latex Corset - UItra Aggressive 25 Rods
Make Money With Aboosto.com
How does it work Aboosto.com?
+25261-2-100550 (Customer Support)
Sat (Sabti) - Thur (Khamiis)
© 2017-2019, Aboosto.com, Inc.